Iikhapteni zeSanti | Tofinho - I-Airbnb
Iikhapteni zeSanti | Tofinho
ICapitaes da Areia lilitye elinqabileyo elifihliweyo, elikumgama ambalwa ukusuka elunxwemeni lwaseTofinho olufihlakeleyo, nombono ogqwesileyo wolwandle.
Gqibezela ngepatio eyonwabisayo elungele ukubukela umnenga kwiinyanga ezibandayo. Ikhuliswe ngengqondo yendalo, iindwendwe zethu ziya konwatyiswa yigadi kunye nekona yemifuno encinci ekhoyo kwabo bafuna isidlo esitsha ngqo kuMama woMhlaba.
Ixesha, kunye namaxhala ehlabathi liphela, ziya kunyibilika njengoko ubanjwa kukuzola kwendlu yethu.
Indlu ephangaleleyo, ekhululekile kwaye ixhotyiswe kakuhle enombono omangalisayo kulwandle oluluhlaza, eyona ndlu ifanelekileyo kunye neselunxwemeni ilindelwe kuwe ngeentsuku zakho ezifihliweyo zelanga.
Indlu inomnyango wayo wokungena, kunye nezitepsi ezikwazisayo, indalo eshushu yamkelekile. Ufikile eKhaya ngoku.
Indlu inoshicilelo lonyawo oluphantsi kuba iyilwe ngokwendalo.
Ukukhanya kwelanga kuphuma igolide kwindlu ebhengeza usuku olutsha, indlu ineplani yomgangatho ovulekileyo, idibanisa kakuhle kwindawo engaphandle, idibanisa zonke. Ukukhanya kwendalo luncedo oluhle kakhulu kwaye isicwangciso somgangatho sibekwe ngendlela yokuba umoya unokuhamba ngokulula endlwini, ngolungelelwaniso olugqibeleleyo kunye neNdalo.
Indlu igqityiwe inamagumbi amabini okulala kunye nestudiyo, ukuya kuthi ga kwi-6 yabantu abadala. Igumbi lokulala eliphambili (i-ensuite) ligcwele kunye nebhafu yokuphumla kunye nomzuzu ozolileyo ojikelezwe yigadi yangaphakathi entle. , banokwenza i-microclimate kwaye oku kuyamangalisa okuza kunye nendlu.
Uphahla luyilwe ukwenzela ukuba umoya ofudumeleyo, okhuphuka ngaphakathi kwindlu, unokushiya kwiindawo zokuvula emacaleni amafutshane ophahleni. Ukhuni lwakhethwa njengesixhobo sokwakha. Injongo kukuqokelela ngononophelo ezona nkuni zizinzileyo kunokwenzeka kulo mmandla.
Emini, indawo entle yokuphumla, ukulala phandle esofeni, ukufunda incwadi, ukulima egadini okanye nokulungiselela isidlo ngelixa usolisayo, nabantwana banendawo yabo eyimfihlo enemidlalo emininzi.
Amanyathelo ambalwa ukusuka kwimbali yesikhumbuzo seTofinho kunye nezinye izinto ezikhangayo.
Ebusuku ukukhanya kwenyanga okumangalisayo, ngokuthula kungena kwindawo engaphandle kwaye unenkampani yokutya.
UJulia noFernando bayinxalenye yentsapho kwaye baya kuba sendlwini.
Indawo yokupaka yabucala iyafumaneka ikhuselwe elangeni.
Ukhuseleko kunye nokhuseleko zibaluleke kakhulu ukuba zisetyenziswe. Hlonipha kodwa wonwabe ngalo lonke ixesha.
PS: I-WiFi yasimahla iyafumaneka!
Yiza ujonge i-Inhamabane!
INCWADI YESIKHOKELO IYAFUMANEKA!
Ngaba ufuna uncedo oluncinci? Siyafumaneka ukuba sibukele nanini na sinako. Ifowuni, i-whatsapp kunye ne-airbnb app.
Your are welcome to come and explore my amazing country, Mozambique